UKUJIKWA KOLUSU-INKCAZO, OONOBANGELA, INJONGO KUNYE NENDLELA YOKWENZA OKO? - INYANI.COM - UBUHLE
Ukujikwa kolusu-inkcazo, oonobangela, injongo kunye nendlela yokwenza oko?
Ekhaya Ubuhle Yenza iingcebiso Yenza Iingcebiso oi-Lekhaka Ngu Lekhaka NgoSeptemba 23, 2017
Igama elitsha le-buzz kumzi-mveliso wokwenza izinto, phakathi kwabaqeqeshi bezinto zokuhombisa kunye nabazobi bezinto zokuhombisa, likhonkco. Umjikelo uyafumaneka kwiivenkile zokuhombisa kunye nokusetyenziswa kolusu. Kodwa yintoni kanye kanye eyakhayo ulusu kwaye kubaluleke ngantoni?
Ngoncedo lweengcali zobungcali eBoldsky, namhlanje siphendula yonke imibuzo esisiseko enxulumene nolusu. Imveliso esetyenzisiweyo, ukwenza oku kulusu ibizwa ngokuba ngumjikelo kwaye iyafumaneka kwiimpawu ezahlukeneyo.
Ke, funda apha ngezantsi ukuze wazi konke malunga nolusu olukhonjiweyo kunye nendlela yokwenza njengabaqalayo.
Yintoni ulusu olujikelezayo?
Ukuze uphinde uchaze ubume balo naliphi na ilungu lomzimba wakho, ulungelelwaniso lwendlela yokwenza esetyenzisiweyo. Ukuthanjiswa sisithambisi sokukhanya esifihla imigca emihle, ukuphazamiseka kolusu njengamaqhakuva, amabala, amabala okanye imibimbi. I-Contour ineempawu zokwakha ulusu, ezisebenza kwiiseli zolusu ezichaphazelekayo kunye neepore.
Ukuyibeka ngamagama alula, i-contour ifana netshokholethi okanye isiraphu ye-strawberry oyibeka kwi-ice cream yakho. Ukuba i-ayisi khrim sisiseko (isiseko kunye nesiseko) sokwenza kwakho, ukugudla kuza ngokulandelayo ukufihla zonke iziphene zolusu lwakho kwaye zinike ulwakhiwo olufanelekileyo.
Zithini iindidi ezahlukeneyo zemijikelezo ekhoyo?
Ukuthambeka kobuso buza kwiindidi ezintathu zaseprayimari-umgubo, ukhilimu, okanye ipensile.
Ngokuxhomekeka kuhlobo lolusu lwakho, khetha ukonwaba kwakho. Ikhonkco lomgubo lolusu olunamafutha, ikrimu yeyolusu olomileyo kunye nepensile kwabo bane-acne, amaqhakuva kunye nengxaki yamanqaku kulusu.
Nje ukuba uthathe isigqibo ngohlobo lwentengiso ofuna ukuyithenga, kuya kufuneka uthathe isigqibo ngomthunzi olandelayo. Umthunzi womgca wakho kufuneka ube yimibala emibini emnyama ngaphezu kwethoni yakho yokuqala yesikhumba.
Ngawaphi amalungu oMzimba afuna ukuGungqa?
Onke amalungu omzimba awadingi contouring ngexesha lobuso. Umjikelo ngexesha lokwenziwa usetyenziswa kuphela ebusweni. Uluhlu kufuneka lusetyenziswe empumlweni, ebunzini, esilevini, nasezidleleni zobuso bakho. Umjelo wedwa unokutshintsha ukumila kwezi ndawo, kwaye ngokwenza njalo wenze ubuso bakho bubukeke bucecekile okanye bube yiplumper (njengoko ufuna).
Ungasifaka kanjani isicelo kwiContour ebusweni?
Kukho amanyathelo amathathu alula okufaka intaba ngendlela efanelekileyo ebusweni bakho. Nangona kuyacetyiswa ukuba uye kwintonga yentonga, ungakhetha leyo ilungele uhlobo lolusu lwakho. Qaphela, isixa somhlaba owusebenzisayo ebusweni kunye nendlela odibanisa ngayo ekugqibeleni simisela imilo yobuso bakho.
a) Njengoko bekutshiwo ngaphambili, kuqala kufuneka ucwangcise apho ufuna ukufaka khona ikhontrakthi ebusweni. Isiqulatho sihlala sifakwa ebunzini kwaye sidityaniswe kwicala lenwele, ukuze sibonakale sincinci. Ukuthanjiswa kusetyenziswe kumacala ombuso wobuso bakho. Okokugqibela, i-contour isetyenziswa macala onke empumlo yempumlo, ngamacala, ukuyenza ibonakale ibukhali.
b) Kwinqanaba lesibini, kuya kufuneka udibanise intaba kwisiseko sakho. Ukwenza oku, uzakufuna isiponji esimanzi. Nciphisa amanzi ongezelelweyo kwisiponji emva koko usishukumise ngokujikeleza isetyhula kwiindawo zakho ezichongiweyo ukuze uzidibanise kakuhle. Oku kunokuba lixesha lokuthatha, kodwa kokukhona uyalixuba, kokukhona ubuso bakho buya kujonga. Ukuphela kweli nyathelo, ubuso bakho bunokuba nodaka oluncinci.
c) Ukulawula ubumanzi obuza kwenziwa sisiponji esimanzi ngelixa uhlengahlengisa umjikelo, uthule umgubo oguqukayo ovela phezulu usebenzisa ibrashi enoboya. Apha, isiseko sakho sophela siphela kwaye ungaqhubeka nokongeza imibala efana ne-blush, eyeshadow, umbala wemilebe njalo njalo.
nini gowri ganesha umnyhadala 2020
Umthombo we-omega 3 fatty acid kukutya kwamaNdiya
olona lwimi ludala emhlabeni
indlela yokunciphisa amanqatha esusu ngokukhawuleza ekhaya
Unyango lwasekhaya lweentlungu zemisipha emilenzeni
uyenza njani i-vrat ka khana